Njikwa mkpofu: mkpa, otu esi eme ya na imegharị ihe | Green Renewables
Mmadụ na-aga n'ihu na-ebute ihe mkpofu na gburugburu ebe obibi. Nke njikwa mkpofu ọ dị mkpa inwe ike ibelata mmetụta gburugburu ebe obibi ha. Ọ bụ maka usoro ihe omume dị mkpa iji nwee ike ịme ọgwụgwọ ziri ezi nke ihe mkpofu, site n'ọgbọ ya ruo n'iwepụ ya ma ọ bụ jiri ya mee ihe.
Ya mere, anyị ga-enyefe akụkọ a iji gwa gị ihe niile ịchọrọ ịma gbasara njikwa mkpofu, ihe njirimara ya na otú ọ dị mkpa.
1 Ebumnuche nke njikwa mkpofu
2 Usoro nhazi ihe mkpofu
3 Otu esi ejikwa ihe mkpofu dị ize ndụ
4 Mkpa imegharị ihe n'ụlọ
Ebumnuche nke njikwa mkpofu
Nke a na-agụnye nchịkọta mkpofu, njem, ijikwa ihe ndị pụrụ iche dị ize ndụ, imegharị ihe ndị a pụrụ iji mee ihe. Oge n'aga, njikwa mkpofu aghọwo ihe dị ezigbo mkpa maka ihe gbasara gburugburu ebe obibi na akụ na ụba. Site na oge mbụ, mgbe njikwa mkpofu na-adabere na ibuga ya n'ebe zoro ezo na iji ọkụ ọkụ dị ka ụzọ mbibi, anyị agafewo usoro nhazigharị.
Tụkwasị na nke ahụ, ọ na-eme ka ndị mmadụ mara banyere mmepụta ihe mkpofu, nke na-emetụta mmepụta ngwaahịa na oriri iji belata mmepụta ihe mkpofu. N'aka nke ọzọ, iwu iji belata ọgbọ nke mkpofu. Otu esi akwụ ụgwọ maka akpa rọba ma ọ bụ ime atụmatụ machibido iji plastik na EU na 2021, agbanweela nhazi mkpofu n'ụzọ bụ isi.
Ya mere, ebumnobi ugbu a maka njikwa mkpofu bụ:
Wedata ihe owuwu gị ka o kwere mee.
Mee ka ọtụtụ ihe eji eme ihe na mkpofu ndị a site na ijigharị ihe.
Mmata na mmuta gbasara njikwa mkpofu.
Gbasawanye ogo njikwa mkpofu agbakwunyere ka ọ bụrụ ebe niile.
Jiri ọgwụgwọ na mkpofu ụzọ nke nwere ike nwetaghachi ume ma mepụta mmanụ ụgbọala. Ihe atụ abụọ nke imezu ebumnuche ndị a bụ Sweden na Norway, bụ ndị ghọworo ndị na-ebubata ihe mkpofu iji nweta ume.
Mee ka ojiji nke ihe mkpofu dịkwuo elu n'ọrụ composting na fatịlaịza.
Kwalite teknụzụ mkpofu ọhụrụ ndị na-adị mma na gburugburu ebe obibi na ndị na-adịghị emerụ ahụ karịa usoro ọdịnala dịka ịgba ọkụ.
N'ime ebumnuche ndị a, Ihe kachasị mkpa bụ igbochi ọgbọ nke mkpofu ma belata ya mgbe ọ na-eme. Na-esote, anyị ga-ahụ ihe ndị a na-ejigharị ma megharịa ya ruo n'ókè dị ukwuu iji chekwaa ihe, na-emepụta ume na compost. N'ikpeazụ, a ga-ekpofu ihe mkpofu na-abụghị nke arụgharịgharị n'ụzọ kachasị emerụ ahụ enwere ike. Dị ka anyị hụworo, ihe mgbaru ọsọ ndị a metụtara echiche dị mkpa nke akụ na ụba okirikiri taa.
Usoro nhazi ihe mkpofu
Ijikwa ihe mkpofu na-agafe usoro dị iche iche:
Na-anakọta n'ókè nke ọgbọ, dị ka ebe obibi anyị.
Ụgbọ njem gaa ebe kwesịrị ekwesị maka nhazi nhazi ọzọ.
Hazie dị ka o kwere mee na ụlọ ọrụ mmepụta ihe dị njikere maka ojiji ọzọ.
Mkpofu ikpeazụ nke ihe mkpofu na-enweghị ike ijikwa ya n'ụzọ ọ bụla.
Na omenala, e nwere ụzọ abụọ bụ isi nke ọgwụgwọ mkpofu, na ụzọ abụọ a adịghị etinye aka na iji ihe eji eme ihe ma ọ bụ mmepụta ike. bụ maka:
Ngwunye ala: Na nkenke, a na-echekwa ihe mkpofu n'ebe dị anya site n'ebe ndị mmadụ bi. Ihe ize ndụ nke imetọ ala, aquifers, ma ọ bụ ihe mkpofu dị ize ndụ a na-edozighị nwere ike inwe mmetụta dị ukwuu.
Ịkụ ihe mkpofu: Ụzọ kacha ochie a na-esi ekpofu ahịhịa, a na-ewepụ ihe ndị na-emetọ ya n'ime ikuku.
Ugbu a, e mepụtala ụzọ ọhụrụ e si ekpofu ihe mkpofu:
Pyrolysis: A na-akpọ ya ọkụ n'ime tank nke mechiri emechi nke na-enweghị oxygen. Nke a na-emepụta obere mmetọ yana ọkụ ọkụ na-arụ ọrụ nke ọma n'ihe gbasara ịmepụta ike eji eme ihe. N'ihe gbasara ụfọdụ ihe mkpofu organic ma ọ bụ akwụkwọ nri, enwere ike iji ya nweta mmanụ.
Nhazigharị ndu: Akwukwo ihe ndi ozo, tinyere akwukwo, nwere ike ichikota ma jiri ya mee ihe dika compost ugbo.
Imegharị: jiri ihe ndị dị ngwa ngwa (dị ka aluminom, rọba ma ọ bụ akwụkwọ) mee aluminom, rọba ma ọ bụ akwụkwọ ọhụrụ.
Ọgwụgwọ mmịpụta sludge: N'ihi mmepe ngwa ngwa nke obodo ahụ, ọnụ ọgụgụ nsị abawanyela nke ukwuu. Site na ọgwụgwọ ya, enwere ike nweta ụdị sludge dị iche iche, nke enwere ike iji dị ka fatịlaịza maka ọrụ ugbo.
Ndị a bụ ụfọdụ ụzọ mkpofu ikpeazụ ọhụrụ na njikwa mkpofu. A na-enwewanye ọganihu n'ịchọta ụzọ ọhụrụ a ga-esi jiri ihe mkpofu mee ihe ruo n'ókè kachasị, n'agbanyeghị na a ka nwere ogologo ụzọ.
Otu esi ejikwa ihe mkpofu dị ize ndụ
Ndị a bụ ndị ekwupụtala na-emerụ ahụ nke ọma na mba ụwa:
Ihe mgbawa ma ọ bụ ọkụ.
Ihe mkpofu redioaktivu.
Ọ na-egbu mmadụ ma ọ bụ gburugburu ebe obibi ma bụrụ nnukwu ihe ize ndụ.
N'ọnọdụ ndị a, a ga-echekwa ihe mkpofu, deba aha, bufee ya n'ebe kwesịrị ekwesị ma hazie ya. Gbalịa ijikwa ọzọ dị ka o kwere mee, ma ọ bụ hazie ya n'ụzọ na-akpata obere mmebi.
N'ime usoro ndị a niile, ndị ọkachamara na ndị injinia na-ahụ maka usoro a, na-agbalị ikpochapụ ihe egwu dị ka o kwere mee, weghachite ihe a ga-eweghachi ma jiri nlezianya bufee ya.
Dị ka anyị hụworo, njikwa mkpofu agbanweela nke ukwuu n'oge na-adịbeghị anya. Otu akụkụ kacha mkpa bụ gbasara anyị. Ịkwalite mmata banyere ibelata mmepụta ihe mkpofu na imegharị ihe dị ka o kwere mee bụ isi ihe na-eme ka mkpofu na-aga nke ọma na-echebe gburugburu ebe obibi.
Mkpa imegharị ihe n'ụlọ
Imegharị ihe bụ usoro na-achọ ịgbanwe ihe mkpofu ka ọ bụrụ ngwaahịa ma ọ bụ ihe ọhụrụ maka ojiji ọzọ. Site n'iji usoro a eme ihe nke ọma. anyị nwere ike izere imefusị ihe ndị nwere ike ịba uru, anyị nwere ike ibelata oriri nke akụrụngwa ọhụrụ na, n'ezie, oriri nke ike ọhụrụ. Na mgbakwunye, anyị ebelatala mmetọ ikuku na mmiri (site n'ịkpọ ọkụ na ngwucha ala, n'otu n'otu) yana ibelata ikuku ikuku ikuku.
Imeghari ihe dị ezigbo mkpa n’ihi na enwere ọtụtụ ihe eji emegharị emegharị dịka ihe ndị dị ka elektrọnik, osisi, akwa na akwa, akwa ọla na nke anaghị arụ ọrụ, na ihe ndị ama ama dịka akwụkwọ na kaadiboodu, iko, na ụfọdụ plastik.
Maka ndị ọhụrụ na ndị nwere ahụmahụ, mana ndị ka nwere ajụjụ ụfọdụ, n'ozuzu enwere ọtụtụ mkpọsa ma ọ bụ mmemme mmụta gburugburu ebe obibi na mkpofu na imegharị ihe (kwa afọ) iji kwalite mmata na kuziere ndị mmadụ gbasara mmetụta gburugburu ebe obibi. Ọgbọ nke ihe mkpofu na nchekwa gburugburu ebe obibi iji belata ihe mkpofu.
Enwere m olileanya na site na ozi a, ị ga-amụtakwu banyere njikwa mkpofu na njirimara ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ Green » Gburugburu » Nzughari » Ijikwa mkpofu